Kenya: Yaan la mamnuucin qaadka - BBC Somali
Kenya: Yaan la mamnuucin qaadka
27 Nofembar 2013
Image caption Qaadka Kenya
Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya ayaa ugu baaqaya dawladda Ingiriisku in aanay mamnuucin isticmaalka qaadka ee dalkan Inigriiska gudihiisa.
Ingiriiska waxa la keenaa qaad aad u fara badan oo laga keeno dalka Kenya, laguna iibiyo halkan, inta badanna waa nooca loo yaqaan Miiraa oo aad loogu quutaa magaalada London iyo magaalooyinka kale, waxana beeraleyda qaadka ee dalka Kenya ka soo gala lacag aad u fara badan.
Inta badan dadka iibsada qaadka laga keeno dalka Kenya ee jooga dalkan Ingriisku waxay kala yihiin Soomaalida, Kiiniyaanka, Itoobiyaanka, iyo Yamaniinta.
Hadda ka hor ayaa xoghaya arrimaha gudaha ee dawladda Ingiriisku ay ku dhawaaqday in qaadka loo aqoonsaday inuu yahay nooc ka mid ah daroogooyinka, sidaasi awgeedna lagu talo jiro in gebi ahaantiisaba laga mamnucco dalkan Ingiriiska.
Mudanayaasha ka tirsan baarlamaanka Kenya waxay ku doodayaan oo kale in qaadku uu yahay wax loo isticmaalo ujeeddooyin dhaqan oo ay ka mid yihiin isku imaatinka, guurka, iyo munaasabadaha aroosyada. Waxa kale oo laga cabsi qabaa in mamnuucitaankaasi uu saameeyo nolosha iyo dhaqaalaha dad badan oo reer Kiiniya ah oo beeraley ah